Nhau -Zvakanakira uye zvakaipira ccd uye cmos
Parizvino, mumunda wekuona kwehusiku, CCD interlaced scanning inoshandiswa pakufungidzira.CMOS ndeyepamusoro-tsanangudzo inofambira mberi, saka iyo yekufungidzira mhedzisiro yeCMOS iri nani pane yeCCD.Parizvino, CMOS yakatsiva CCD mumunda wechiratidzo chehusiku.
CCD uye CMOS sensors maviri anowanzo shandiswa mapikicha masensa parizvino.Ose ari maviri anoshandisa mafotodiode ekushandura photoelectric kushandura mifananidzo kuita data redhijitari.Musiyano mukuru inzira iyo data yedhijitari inofambiswa nayo.Kazhinji kutaura, iwo mufananidzo mhando yeCCD machipi anoshandiswa mune akajairwa dhijitari makamera ari nani.
Zvakanakira uye zvisingabatsiri zveCCD: kushandiswa kwesimba shoma, kuderera kwekushanda kwemhepo;kuvhunduka uye kushorwa kwekudedera, kuita kwakagadzikana, hupenyu hurefu;high senitivity, yakaderera ruzha, yakakura dynamic range;kukurumidza kupindura kumhanya, kuzviongorora pachako basa, kukanganiswa kwemufananidzo kudiki, hapana chifananidzo chakasara;application VLSI process tekinoroji kugadzirwa, yakakwira pixel yekubatanidza, saizi chaiyo, mutengo wakaderera wekutengesa kugadzirwa.
CMOS Advantages uye Zvakaipa: Kunzwa, ruzha uye rima ikozvino kushanda kwe sensor yakaderera zvakanyanya kupfuura yeCCD sensors.Masensa eCMOS haadi akaomesesa ekunze wachi mutyairi zvemagetsi kuti agadzire chaiwo mavoltages uye masaisai ekufambisa kuchaja kutenderedza sensor.Iwo haadi akaoma ekunze kuverenga emagetsi, maviri maviri correlation samplers uye A/D anoshandura.
Ese magetsi anodiwa pakuverenga akavakirwa mukati me sensor.Chipu chimwe chete chinongoda magetsi akachena kuti ape mufananidzo wakanaka uye anogona kuverengerwa zvakananga nedhijitari.Ichi ndicho chikonzero maCMOS sensors ane mukana wakakura maererano nemutengo.